August 10, 2020 - Bahuthutagabar
“သိပ္ပံနည်းအရ လေ့လာတွေရှိထားတဲ့ တရားထိုင်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး (၉) ချက်”
August 10, 2020 Bahuthutagabar 0
“သိပ္ပံနည်းအရ လေ့လာတွေရှိထားတဲ့ တရားထိုင်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး (၉) ချက်” လူတော်တော်များများက တရားထိုင်ခြင်းကနေ ရရှိစေမယ့် ကောင်းကျိုးတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလာတာကြောင့် ခုနောက်ပိုင်းမှာ ကမ္ဘာနှင့်တဝှမ်း တရားထိုင်ခြင်းကို လူကြိုက်များလာပါတယ်။ တရားထိုင်တယ်ဆိုတာ သင့်ရဲ့စိတ်ကို ထိန်းချုပ်နိင်ဖို့နဲ့ သင့်ရဲ့ အတွေးစိတ်ကူးတွေကို တည်ငြိမ်လာစေအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်အောင် အကူအညီပေးနိုင်တဲ့အရာလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ် …။ […]
စိနျချေါရငျ တိမျပျေါအထိတကျမယျ့ ဒစေီ ဖွူဖွူထှေးကှ
ခဈြစရာကောငျးပွီး ရိုးသားဖွူစငျလှနျးတဲ့ သရုပျဆောငျ ဖွူဖွူထှေးကတော့ သူမရဲ့ တကျကွှတဲ့ အမူအယာလေးတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားလာသူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ ဖွူဖွူထှေးက အခုဆိုရငျ ကွျောငွာတှကေို လကျမလညျအောငျ ရိုကျကူးရတဲ့အပွငျ နောကျပိုငျး မှာ လညျး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှမှော နိုငျငံကြျောသရုပျဆောငျတှနေဲ့အတူတူ တှဲဖကျပွီး သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့အထိ အောငျမွငျမှုရရှိလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ ပရိသတျတှကေလညျး […]
အမေကနောက်ယောကျာ်းနဲ့ အဖေကနောက်မိန်းမနဲ့ မိထွေးကိုယ်တိုင်လာပို့သွားတာ မိဘမဲ့ဂေဟာကို သနားစရာလေး ဗီဒီယိုဖိုင် Vedio အောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်သည်။ တကယ်သနားစရာကောင်းတဲ့ ကလေးရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပါ။အမေကလည်းနောက်ယောင်္ကျားနဲ့အဖေကလည်း နောက်မိန်းမနဲ့တဲ့ ခုဒီကလေးကို မိဘမဲ့ဂေဟာလာပို့သွားတာက မိဒွေးက လာပို့သွားတာတဲ့။ဘယ်လောက်တောင် ဆိုးရွားပြီးသိက္ခာဆိုတာမရှိ မိဘမေတ္တာဆိုတာမရှိတဲ့ မိဘတချို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေပါ။နောင်တစ်ချိန် ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ ဒီဒဏ်တွေကို ခံစားလာရတာက ကလေးငယ်လေးတွေပါ။ ကလေးပြောစကားအရတော့ မိဘက သင်္ကန်းကျွန်းမှာဖြစ်ပြီး […]
“ချစ်တက်တာကို မပြပေမယ့် ချစ်သူကို ဖူးဖူမှုတ်ထားမယ့် အင်္ဂါ”
“ချစ်တက်တာကို မပြပေမယ့် ချစ်သူကို ဖူးဖူမှုတ်ထားမယ့် အင်္ဂါ” စွမ်းအားကြီးမားပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေကို နှစ်သက်တဲ့ အင်္ဂါသား၊ သမီးတွေဟာ အခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ရင် အရှုံးမပေးဘဲ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူ၊ မိသားစုအတွက် ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ် ကာကွယ်မယ့်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ် … ။ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင်လည်း ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး အောင်မြင်အောင် […]
အွန်လိုင်းပေါ်ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်မှ လင်းလင်းကို ပြောကြားချက်များအပေါ် ရှင်းလင်းလာတဲ့ ယုန်လေး
အွန်လိုင်းပေါ်ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်မှ လင်းလင်းကို ပြောကြားချက်များအပေါ် ရှင်းလင်းလာတဲ့ ယုန်လေး သြဂုတ်လ ၉ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာတော့ ယုန်လေး ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဆိုတော်လင်းလင်းကို ပြောဆိုခဲ့တဲ့ သနင်းတွေ Facebookမှာ ပျံ့နှလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်း ထွက်ပေါ်လာမှုနဲ့ သတ်သတ် ပြီး ယုန်လေးရဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း […]
သောကြာသားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်သက်စာ ဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများ..
သောကြာသားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်သက်စာ ဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများ… မိမိတို့ရဲ့ အသက်အပိုင်းခြားကို ကြည့်ပြီး အဟောကို ဖတ်ပါလေ။ ညံ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ချေရမယ့် ယတြာကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ နှစ်တွေမှာလည်း ကောင်းသထက် ကောင်းစေဖို့ ချေရမယ့် ယတြာတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သောကြာသားသမီး ဖြစ်သောသင်သည် အသက်..၁၊၉၊၁၇၊၂၅၊၃၃၊၄၁၊၄၉၊၅၇၊၆၅၊၇၃၊၈၁၊ ၈၉၊၉၇၊၁၀၅ […]
ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဟောကြားတဲ့ “မြန်မာပြည် က လူတွေ မညီညွှတ် ရခြင်း အကြောင်း”
ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဟောကြားတဲ့ “မြန်မာပြည် က လူတွေ မညီညွှတ် ရခြင်း အကြောင်း” Shwe Let | August 10, 2020 | Knowledge | No Comments Share Tweet ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဟောကြားထားခဲ့တဲ့ တရားတော်တွေထဲမှ မြန်မာပြည် […]
ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပြီနော်
ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပြီနော် ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ပါ သံပုယိုသီ3းလုံး, ကြက်သွန်ဖြူအတက်ကြီး5တက်, ဂျင်းအနေတော်အတက် တစ်တက်!! ပထမဆုံး သံပုယိုသီးကို 4စိတ်ထိုး, ကြက်သွန်ဖြူ5တက်အခွံခွါ, ဂျင်းကိုအခွံခွါ ပါးပါးလှီး!! ရေ2လီတာ ပွက်ပွက်ဆူထဲကို ခုနကလှီးတာတွေထည့်ပီး နာရီဝက်ပြုတ်!! ပြီးရင်အဖတ်တွေဆယ်ပီးပစ်လိုက်ပါ!! အရည်ကိုအအေးခံပီး အစာမစားခင်နာရီဝက်အလိုမှာ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်စာသောက်ပေးပါ!! တစ်နေ့3ကြိမ်ပေါ့!! […]
ညီမကို ဗန်းပြပီး ဂွင်အကြီးကြီးဖန်ကာ သူများမိသားစုကို ဖြိုခွင်းလိုက်တဲ့ သင်းသင်း
ညီမကို ဗန်းပြပီး ဂွင်အကြီးကြီးဖန်ကာ သူများမိသားစုကို ဖြိုခွင်းလိုက်တဲ့ သင်းသင်း အလှမယ်သင်းသင်းဦးကတော့ သူ့ညီမဝါဝါဦးကိုဘန်းပြပီး ဂွင်အကြီးကြီးဖန်ကာသူများမိသားစုကို ဖြိုခွင်းလိုက်ပြန်ပြီ ကြောက်ဖုတ်ကောင်းလတ်ထှာ ရွှေပေါက္ကံ ဝဏ္ဏကျော်စွာလမ်း နှစ်ထပ်တိုက်မှာနေတဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီး ဦးစိုးညွှန့်နဲ့သူ့ညီမကို မယူရင်တိုင်မယ်တောမယ် လုပ်လို့မယားကြီးကိုကွာပီးယူလိုက်ရတယ် ဗျာ ခုတော့ သူရောသူ့ညီမရော အဲဒီအိမ်ကြီးပေါ်မှာ တက်ပီးချယ်လှယ်နေကြပြီ သင်းသင်းက တာမွေ မေတ္တာညွှန့် […]
“ချစ်သူကို အသည်းနင့်အောင် ချစ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အပြုအမူ (၅) မျိုး”
ချစ်သူကို အသည်းနင့်အောင် ချစ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အပြုအမူ (၅) မျိုး … မိန်းကလေးတွေထဲမှာ ချစ်သူရဲ့ အသည်းနင့်အောင် အချစ်ခံရတဲ့သူတွေဟာ ကံအကောင်းဆုံးသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို အသည်းနင့်အောင်ချစ်တဲ့ ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်လားဆိုတာ ဒီအချက်တွေကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူနဲ့ ဒီအချက်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုရင်တာ့ သင့်ကို […]